कोरोनाको नयाँ 'इपिसेन्टर' इटालीबाट के... :: जीवन क्षेत्री :: Setopati
कोरोनाको नयाँ 'इपिसेन्टर' इटालीबाट के सिक्ने?
जीवन क्षेत्री काठमाडाैं, चैत ६
यही मार्च १७ को 'द डेली' पोडकास्टका लागि न्यूयोर्क टाइम्सका प्रस्तोताले इटालीको कोरोना भाइरसग्रस्त बर्गामो सहरका डा. फाबियानो डि मार्कोसित हृदयस्पर्शी कुरा गरे। डा. मार्को सोही सहरको हजार शैयासहितको पापा ज्योभानी अस्पतालका श्वासप्रश्वास विभागका प्रमुख हुन्।
उनी भन्छन्- अस्पतालको सर्जरी विभागको काम ८० प्रतिशत रोकेर ती विभागका वार्डहरू श्वासप्रश्वास विभागका लागि उपलब्ध गराइएको छ। अहिले दैनिक ५० देखि ७० जना 'रेस्पिरेटरी फेलर'का (फोक्सोको काम गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएका र ज्यान बचाउन भेन्टिलेटर आवश्यकता भएका) नयाँ बिरामी आइरहेका छन्। हामीसित अहिले आकस्मिक कक्षमा समेत गरेर ३५० भन्दा बढी त्यस्ता बिरामी छन्।
सरकारी अस्पतालको क्षमता कम हुँदै गएसँगै ती अस्पताललाई घेरेर निजी अस्पतालको भिड खडा भएको छ। सरकारी अस्पतालबाट 'लखेटिएका' बिरामीको घरखेत बेचाएर सेवा दिने ती अस्पताल सञ्चालकमध्ये धेरै पहुँचवाला र राजनीतिक संरक्षण भएका डाक्टर र अरू लगानीकर्ता छन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत ६, २०७६, ०४:२०:००